राष्ट्रपति , प्रधानमन्त्री कांग्रेसले नै बनाउछ! पाटिको निर्णय बिना कोहि दायाँ बायाँ नलाग्नुहोस् – सभापति सेर ब. देउवा – Newsharpal24
राष्ट्रपति , प्रधानमन्त्री कांग्रेसले नै बनाउछ! पाटिको निर्णय बिना कोहि दायाँ बायाँ नलाग्नुहोस् – सभापति सेर ब. देउवा
February 7, 2021 adminLeaveaComment on राष्ट्रपति , प्रधानमन्त्री कांग्रेसले नै बनाउछ! पाटिको निर्णय बिना कोहि दायाँ बायाँ नलाग्नुहोस् – सभापति सेर ब. देउवा
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको सभापति सेर बहादुर देउवाले पाटिका नेता तथा कार्यकर्ता हरुलाइ पाटिको निणय भन्दा बाहिर नजान आग्रह गरेका छन ।कांग्रेसको बारेमा बिभिन्न कुरा हरु बाहिर आइ रहेको बेलामा देउवाले भने “रास्ट्र्पति , प्रधानमन्त्री , मन्त्री ज-जस्लाइ जे जे चाहिय पनि उपयुक्त जिम्वेवारि उपयुक्त ब्यक्ति लाइ उपयुक् समय मा दिइने छ । पद को लालाचामा कोहि कतै नलाग्नुहोस” ।दिगो न्युज सङ कुरा गर्दै देउव ले पाटि मा कुनै बिमति नरहेको पाटि केन्द्रीय समिति को निणय अनुसार नै अगि बढीरहेको बताउनु भयो ।
दिगो न्युज को रामचन्द्र पौडेल ले प्रचन्ड को उक्साहट मा पाटि फुटाउदै हुनुहुन्छ रे नि भन्ने प्रस्न मा देउवाले भने नेपालि कांग्रेस र यस्का नेताहरु कसै को उक्साहटमा लाग्ने नभै आपसि सल्लाहामा अघी बढने पाटि भयको ले यस्ता अनाबस्यक हल्लाको पछि नलाग्न सम्पुर्न नेता तथा कार्यकर्ता हरुमा आग्रह गरे ।देउवा ले भने केपि वलि को असम्बैधानिक “कु” को बिरुध्द पाटि एक जुट भै आन्दोलन मा होमियको र उक्त कदम नसच्चिय सम्म आन्दोलन जारि रहने छ ।
अर्को प्रसङ्ग मा देउवाले नेकपा ले देस र जनता लाइ लुट्ने र कङ्गाल बनाउदै नेपाल लाइ असफल रास्त्र बनाउन लागि परेको छ । यस बाट नेपाल लाइ जोगाउन नेपालि कांग्रेस सम्यम हुदै अगि बढनु पर्ने छ्। यस्तो बिसम अबस्था मा कांग्रेस एक जुट हुदै अगि बढनुको बिकल्प नरहेको हुदा समग्र नेता तथा कार्यकर्ता लाइ परिस्थीति बुझेर अगि बढन आग्रह गरे ।
ओलीलाई नै सरकार चलाउन सर्वोच्चको निर्देशन !